မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ တကယ်ဖြစ်နေသလဲ | ဧရာဝတီ
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ တကယ်ဖြစ်နေသလဲ
နန်စီ ဟတ်စင်ရော့ဒ်| May 4, 2012 | Hits:1
| | မြန်မာပြည် လက်ရှိအပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်များများက လောလောဆယ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်နေကြ ပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောရရင် အခြေအနေက စိတ်ပျက်စရာ အခြေအနေတခုပါပဲ။ အခုဆိုရင် တစုံလုံး အနေအထားကိုသာမကပဲ အသေးစိတ်ကိုပါ လေ့လာရေးသားတင်ပြဖို့ ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။
မန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံနေသော ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
“အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ” လို့ ကျမ ခေါ်လိုတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ သံတမန်တွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အေဂျင်စီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲဆိုတဲ့ မုသားတွေအောက်မှာ မြန်မာပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ဓားပြတိုက် ရောင်းစားခံနေကြရပါတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည် “အရပ်သား” အစိုးရဟာ နိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေအပေါ်မှာသာ အမြတ်ထုတ်ဖို့ စိတ်ဝင် စားနေသူ အတော်များများရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရနေပါတယ်။ ဥပမာ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန် (David Cameron) ဆိုရင် မြန်မာပြည် အလည်အပတ်ခရီးစဉ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၀ ယောက် ခေါ်သွားပါတယ်။ ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် စီးပွားရေးအရ တချို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ ဆက်လုပ်ထားဆဲဖြစ်တာမို့ အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကို သူက ခရီးသွားဧည့်သည်လို ခေါ်သွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို သိပ်ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတခုဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေ ပိုရလာရင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလိုမျိုး အကျိုးရှိနိုင် တယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြောရရင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ပထမအကြိမ် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကစလို့ အဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း ၆ ထောင်ကျော်ကို တရားဝင် အကူအညီပေးသူတွေနဲ့ လူမူအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်း ရာပေါင်းများစွာဆီ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေကတော့ ဒီအကူအညီတွေကို အဓိက လက်ခံရရှိသူတွေ မဟုတ်ကြသေးပါဘူး။ အစိုးရ အရာရှိတွေ၊ နိုင်ငံတကာက ကျွမ်းကျင်သူတွေ နဲ့ အကြံပေးတွေပဲ တဖြည်းဖြည်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြတာပါ။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သူတွေက မြေသိမ်းတာတွေ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကို ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလိုပဲ ပြည်သူတွေ သူတို့ မြေပေါ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းခံရပြီး အဲ့ဒီအတွက် တရား မျှတမှုဖြစ်စေဖို့လည်း ဘာအကူအညီမှ မရပါဘူး။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ အခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုလို့ ထင်ရပေမယ့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကတည်းက အာဏာရလာတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပဲ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြား အကူအညီက နိုင်ငံတခုအတွက် အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တာက နိုင်ငံတည်ဆောက်ရာမှာ လူအနည်းကပဲ ဆောင်ရွက်တာမျိုး မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားတွေ ဒီအခွင့်အလမ်း မရှိသေးပါဘူး။
၁၇ ရာစုနဲ့ ၁၈ ရာစုမှာ အရင်းရှင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်ချဲ့ တွေ ဝင်ရောက်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ကမ္ဘာကြီးကို လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Hudson Bay ကုမ္ပဏီဟာ ကနေဒါ ဒိုမီနီယံနိုင်ငံ (Dominion of Canada) မဖြစ်ခင် ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအများစုကို အုပ်စိုးသူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ရုဒ်ဒီရှား (Rhodesia) ဆိုတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်လာဖို့အတွက် အင်္ဂလန်ဖွား တောင်အာဖရိက စီးပွားရေးသမား စီစယ် ရုဒ် (Cecil Rhodes) ကို ဗြိတိသျှ တောင်အာဖရိက ကုမ္ပဏီ (British South Africa Company) က အာဏာပေးခဲ့တယ် (ရုဒ် ပညာသင်ဆုတွေ ပေးနေဆဲဖြစ်တယ်)။ ပြီးတော့ အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ (East India Company) က ဗြိတိသျှအစိုးရ အတွက် အိန္ဒိယ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေကို လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်က အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီရဲ့ တောင်းဆို ချက်တွေကို လိုက်လျောဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့အခါမှာ ကုမ္ပဏီက ဗြိတိသျှအစိုးရဆီကနေ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဗြိတိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ အခုဆိုရင် သူတို့ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေအတွက် ဈေးကွက်အသစ်တွေပွင့်လာအောင် တွန်းအား ပေးနေကြပါတယ်။ သူတို့က ဈေးကွက်နဲ့ အကြွေးလို စီးပွားရေးကိစ္စတွေပဲ ပြောဆိုကြပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဂေဟဗေဒ ဒါမှမဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ မပြောဆိုကြပါဘူး။
မြန်မာ “အရပ်သားအစိုးရ” ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆုချီးမြင့်တဲ့အနေနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အစိုးရတွေ၊ နော်ဝေး၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ သြစတြေးလျအစိုးရတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု အများစုကို ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ သြစတြေးလျအစိုးရကတော့ မြန်မာပြည်မှာ သူ့နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ ပိတ်ဆို့မှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေက ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှုတွေဟာ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးဝင်ငွေရရာ ရင်းမြစ်တွေပါ။ အဲ့ဒီတင်ပို့မှုတွေကနေ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၃ ထောင်နီးပါး ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံက ဒီလို သဘာဝသယံဇာတတွေနဲ့ ကြွယ်ဝနေပေ မယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကရတဲ့ အခွန်ဘဏ္ဍာတွေဟာ ချစားနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တချို့ရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲကိုပဲ ရောက်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ကို အပြေးအလွှားသွားမယ့် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ တင်းမာမှုတွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး တွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေမလဲဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ကျမတို့ လေ့လာဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(လန်ဒန်ထုတ် The Independent သတင်းစာရဲ့ အွန်လိုင်းဘလော့ဂ်တွင် Nancy Hunson-Rodd ရေးသားထားသော What is Really Happening in Burma Today ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆို ဖော်ပြပါ တယ်။ ဒေါက်တာ နန်စီဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Edith Cowan တက္ကသိုလ်မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် အထက်တန်း သုတေသီအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။)
ဒို့ပြည်သူတွေ အလေးပြုကြရမယ့် ‘ဒို့အလံ’မှားတာကို ၀န်ခံရဲပါစေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရူးနေသလောမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု - ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေအထား ၄ ခု (၁)တအိမ်ထောင် ကလေးနှစ်ယောက်က အကောင်းဆုံး နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> mg la May 4, 2012 - 1:07 pm	I think…if you want to see burma progress, we need to invite foreign investments (i mean top international companies, such as BP,SONY,SAMSUNG,GE,BOING…..). Only respective government leaders can bring suchabig companies…please don’t be too nagative.
Reply	mya May 4, 2012 - 2:12 pm	မင်းတို့ ဘဲ အမျိုးမျိုး မဖွင့်တော့လဲ မဖွင့်လို့ ၊ဖွင့်ပေးတောလည်း တမျိုး ဘာလုပ်ရမှာလဲ(လူ့အလိုနတ်မလိုက်နိုင် ဆိုသလိုပါဘဲ)
Reply	han May 4, 2012 - 3:06 pm	They want to say , not mean like that,,,,,,!!!!!!!
Reply	joyboy May 4, 2012 - 3:08 pm	Land confiscaters whether they are ruling officer or business man, they are so disgusting. They are so greedy, corrupt, and try to kick out land owners from their land. No one will always bow down and surrender whatever they are doing. If Burmese people suffer so much pain and suffering, they are dare to exchange their lives. Freedom and justic must be for every single Burmese citizen. It must not only for ruling officers and their partners.
Reply	peggy May 4, 2012 - 6:44 pm	Burma needs foreign investments.
Both foreign business people and rich Burmese can haveaprofit from it. Poor Burmese, too. They can getajob. (There are lots of jobless people in Burma.)
Don’t be too narrow-minded!
Reply	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ May 5, 2012 - 2:22 am	မပက်ဂီ ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုလဲ လူတွေ မတရား အဖိနှိပ်ခံ၊ မတရား အသိမ်းခံရပြီး လက်တဆုတ်စာ လူတွေပဲ ချမ်းသာနေတယ်။ တကယ်လို့ စီးပွားရေးတွေ ပွင့်၊ သမတကြီးလုပ်နေတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကင်း၊ ဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ် ထူထောင်နိုင်ချိန်ကျရင် လိုင်စင်ရတဲ့ စီးပွားရေး သမားကြီးတွေ ချမ်းသာဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ဝတ်စုံနဲ့ စစ်တပ်ရာထူးယူ၊ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာနဲ့ လစာယူထားသူတွေ အပိုအေးဓမြ ကောက်ကြေးတွေ မယူနိုင်တော့လို့ အဲသည်ငွေတွေ သူတို့အိတ်ထဲ ရောက်မယ့်အစား ပြည်သူတွေ အကျိုးရှိအောင် သုံးနိုင်မယ် မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Reply	charlie May 4, 2012 - 8:54 pm	you look like another slave whose can’t get
out the shelter.you just good analysing about our country, But how? what you want is to suffering about civil war and to
to become apart of YUNAN (CHINA)?. Forget it Girl and you go to hell and I wish
you were born in the KAREN or KACHIN state in country,so you will know what so
civil war about what CHINA can do about.
Anyway you had good analysing about
past But present and future so doesn’t help that much for our people. So please
Reply	bengugu May 4, 2012 - 9:11 pm	I am absolutly not agree with negative view author.
Reply	Win May 5, 2012 - 12:11 am	သူပြောတာလည်းမမှားပါဘူး။မလွဲမသွေလည်းကြုံရမှာပါ။အဓိကကတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတူတကွကြိုးစားကြဖို့ပါဘဲ။Cambodia တင်မကပါဘုးAfricaတို့ မှာလည်းသူတို့လုပ်သွားလို့ ပိုပြီးဆင်းရဲတွင်းနက်သွားတဲ့သာဓကတွေအများကြီးပါ။
Reply	min khaing(malaysia) May 5, 2012 - 1:42 am	မြ ပြောတာသိပ်မှန်တာပေါ့သည်ထက်ပြောရရင် မြန်မာလူမျိုးအလိုကမ္ဘာက ကိုမလိုက်နိူင်တော့တာ
Reply	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ May 5, 2012 - 2:27 am	စက်ရုံတွေဖွင့် အလုပ်တွေ ခန့်လာပြီး အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေရဲ့ အကာအကွယ်နဲ့ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခ အပြည့်ရ၊ ခံစားခွင့် ထိုက်တန်စွာ ရနိုင်မယ့် အဖြစ်ကိုတော့ ၀မ်းသာ စွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလဲ ဘာမှ နလပိန်းတုန်း မသိတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေ အထက်စီးက လာအုပ်ချုပ်နေတာထက် တကယ် ဌာနတွင်း တတ်သိ နားလည်တဲ့ ၀န်ထမ်း အရာထမ်းတွေ အုပ်ချုပ်နိုင်မယ့် အချိန်အခါကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေပါတယ်။ မတရားမှုတွေ လျော့ပါးတော့မှာမို့ အားတက်မိပါကြောင်း။
Reply	U Maung Aung May 5, 2012 - 2:31 am	In global economyacountry development requires foreign investments.
But the salient points in the article are true.
Just review the recent history on Kampuchea after Pol Pot.
NLD leadership, 88 Students and like- organizations, no doubt, would pay special attention to kind of that article and make public awareness.
Reply	Maung Maung May 5, 2012 - 6:13 am	ကောင်းပါတယ်။ သတိထားရမဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ မနန်စီ။
အဲဒီတော့…ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိထိရောက်ရောက် ရှိအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မီဒီယာပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့လေ။ တနေရာတည်းဆိုရင် လူတစ်ချို့လောက်ပဲ သတိပြုမိမှာပေါ့ဗျာ။ နည်းလမ်းလေးရှာပြီး ဒါမှမဟုတ် ကိုအောင်ဇော်တို့ အကူအညီနဲ့ မြန်မာပြည် အနှံ့ လူတန်းစားပေါင်းစုံ သတိပြုမိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	သိကြားမင် May 5, 2012 - 11:22 pm	အကြောင်းအကြိုးဆိုတာဆက်စပ်နေပါတယ် 22နှစ် တာလုံးလုံး သန်းရွှေအစ သိန်းစိန်အဆုံးအကုန်လုံး10သက်စားမကုန်အောင်ယူပြီးပါပြီ ဆက်ပြီလိုချင်နေတုံးပါဘဲ ပြည်သူကတော့ ယာပိုင်သူကကျွန်ပါ ပြည်သူတွေမှာက တနေ့ဆန်တပြီချက်ရင်တောင် နောက်ကျတဲ့သားသမီးမစားရလို့ငိုသံကိုကြားစေချင်တယ် သူဋ္ဌေးဘွဲ့ကိုယူထားသူတွေ ဟာဘယ်သူတွေလဲ မတရားအပြုခံလို့တိုင်ရင် တိုင်သူကဆင်ရဲသား တိုင်သူသာထောင်ထဲရောက်တဲ့ခေတ်ပါ မရှိလို့ကျွန်ခံ မီးပူအကပ်ခံရတဲ့စနစ် တရားဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာတော့တကယ်ရှိပါတယ် ရင်ထဲမှာတော့ စားစရာမရှိတော့တရားမရှိနိုင်ပါ သိကြားသိပါတယ်။
Reply	Duwa May 7, 2012 - 1:20 pm	ထကျလော့….. လွတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်နေရုံနဲ့ မျိုးချစ်သဘောမဆောင်ပါ… ထိရောက်တဲ့ နည်းပညာ…. ထိရောက်တဲ့ စနစ်… ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေမျိုးသာလျှင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမှာပါ..
Reply	kmtar May 10, 2012 - 12:00 pm	It seems, author wants us to be careful. The nature is that mostly the partners of the foreign investors can be benefited compare to staffs, workers. With the democratic mechanism, we have to adapt better and fair rules and regulations to protect the workers. Do not worry much about investments for which we desperately needed. Let them come first. Then follow with better rules and regulations. The current law makers will defend our own people. I hope. Otherwise, you have the right to suggest them asapeople of Myanmar.
Reply	ptu June 1, 2012 - 12:30 pm	သိပ်မှန်တာပေါ့ အကူညီပေးမယ်ဆိုတိုင်း၇မ်းယုံလို့၇တာမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့် ဘက်က ကော ဘာတွေပြန်ပေးဆပ်၇မလဲ ဘာတွေနစ်နာနိင်သလဲခု ကတည်းက ကြို စဉ်းစာထား၇မယ် လွတ်တော်ကို စားလှယ်များနဲ့ နိုင်ငံအကြံပေးများ တကယ် အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်
Reply	ptu June 1, 2012 - 12:31 pm	အာလုံးဝိုင်းဝန်းအဖြေ၇ှာကြပါ မြန်မာပြည်သူအပေါင်းတို့
တခြားဖတ်စရာများ ဒို့ပြည်သူတွေ အလေးပြုကြရမယ့် ‘ဒို့အလံ’
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု – ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေအထား ၄ ခု (၁)
တအိမ်ထောင် ကလေးနှစ်ယောက်က အကောင်းဆုံး